Allgedo.com » Raad raaca fufka fikradaha sheelan ee Buuga “Xadka Riddada maxaa ka run ah” Q.1aad – WQ: Sheekh Moxamed Aadan Cusmaan
Home » Faallo, Islam »
Raad raaca fufka fikradaha sheelan ee Buuga “Xadka Riddada maxaa ka run ah” Q.1aad – WQ: Sheekh Moxamed Aadan Cusmaan
Print here| By: allgedo.com: Monday, October 20, 2014 // u Jawaab
Mar aan tagay asbuuci hore magaala London ayaa waxaan la kulamay goob lagu iibinayo Buuga “Xadka Riddada maxaa ka run ah” ee uu qo ray Cabdisaciid Cabdi Ismaaciil. Waxaan aqriyay buugii, aqris dabadi waxaa isoo wacay labo maalim kadib qoraaga maqaalka “Gar garaad goobaysa” oo iisheegay inuu maqaal ka qoray buuga, kuna faafiyay baraha internetka, oo ay u dheer tahay inuu waliba u diray aqo on yahano reer London ah oo intooda badan aan garanayo.
Sidoo kale waxaa horay uga hadlay Sh Maxamed Umal waxaana wax ka qoray Sh Maxamed Idiri iyo Culumo kale. Ujeedo Qoraalkan waa mid raadraacaya fufka fikradaha uu buugu xunbaarsanyahay, iyo dulucda, dooda biyi dhaceedu yahay afkaarta guracan ee ku qoran buuga “xadka riddada maxaa ka run ah”.
Sidoo kale waxa uu lafagurayaa gafafka ku jira habka iyo hanaanka uu qoraagu u maray daraasadda masaa’isha Shareecada islaamka.
Waxaa kaloon soo bandhigi doonaa xeerarka, tubta iyo toobiyaha loo raaco cilmibaarista mas’aasha fiqiga shareecada islaamka. Ugu danbayn waxa an baaq u dirayaa qoraaga buuga in uu ka noqdo khaladaa dka uu ka galay diinta islaamka.
Cajiib: Waxaan kaloo dhagaystay Cabdi saciid oo lagu waraystay idaacad soomali ah, kuna andacoonayo inaan culimadu fahmin ulajeedooyinka qoraalkiisa, dana kalane in ay ka leeyihiin dhaleecaynta buuga, wuxuu kaloo youtube ka soo galiyay bayaan uu ku difaacayo aragtida buuga.
Anigoo iskusoo xoo rinayo; qoraalka Cabdisaciid(Buuga Riddada maxaa ka runa) difaaciisii ka danbeeyay ba, iyo eedaymaha loosoo jeediyay ayaan qoraal naqdi(ilkunaq)ah ku soo bandhigaynaa, sida cabdisaciid ugu gafay diinta islaam iyo mujtamaca soomaaliyeed ee Muslimka ah.
Gujji halkaan si aad u akhriso qoraalka oo dhan oo PDF ku jira
WQ: Moxamed Aadan Cusmaan
UK Birmingham 16/10/14
E mail: abuukawser@hotmail.com